Xiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la’aanta”Xog Caafimaad” | War Helaa Talo Hela	Saturday, May 25th, 2013	Home
Xiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la’aanta”Xog Caafimaad”
Himid la’aanta waxaa loo aaneeyaa burbur qoysas badan taasoo ay sababtay raga oo ay ku adag tahay inay aqbalaan inay ku fashilmeen qancinta marwooyinkooda dhinaca sariirta. Meeshii laga waajihi lahaa dhibka waxaa jira rag isku qariya boor iyo qiiq meeshana keena dood aan meeshaba ku jirin. Xeeladaha ay isticmaalaan waxaa ka mid ah iyagoo sariirta yimaada marka marwado seexato. Arintu waxay circa isku shareertaa marka xaqiiqda la wajaho ama runta loo sheego. Dhibkaan waxaa kaloo la ogaaday inuu sababi karo niyad jab & murugo iyo kalsoonida qofka oo hoos u dhacda